Duubo Screen waa arrin in uu mar walba u xaqiijiyey in dadka isticmaala ay hesho in la ogaado barnaamijyadooda dheeraad ah iyo sidoo kale technology ee la xiriira waxaa sidoo kale browsed si fiican ee uu dhiibay inay nidaamka iyo arrin guud ayaa ka fuliyey gudaha wanaagsan ee suurtagalka ah .
Waxaa sidoo kale in la xuso in user ay sidoo kale ka dib markii labada OS waaweyn ee mobile sida Android iyo macruufka ah si loo hubiyo in shaashadaha telefoonada ayaa waxaa sidoo kale la duubay. Sidaa darteed waa in la ogaadaa in dadka isticmaala ee waa in sidoo kale la hubiyo in ay barnaamijyadooda ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira waxaa loo doortay si loo hubiyo in shaashadda telefoonka ee waa flawlessly duubay. Si aad u hubiso in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah arrin tahay in arrintan la xiriira waxaa lagu talinayaa in la hubiyo in tutorial la akhriyey buuxa si ay u helaan aragti iyo aqoon dheeri ah.
Qeybta 1: Top taariikhqorihii 5 Screen App u iPhone
Qeybta 2: Top 5 Screen taariikhqorihii App u Android
Marka ay timaado in macruufka markaas waa barnaamijka ugu casri ah oo u xiran yihiin in aan la heli karin in dadweynaha iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user waa in la hubiyo in app ugu wanaagsan ee loo xiraa si aad u samaysay shaqada sameeyo. Marka ay timaado in ay barnaamijyadooda duubo shaashadda ka dibna soo socda waa 5 oo ka mid ah si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah tahay sameeyey shaqeeya hab ugu fiican.
Soo diyaariyay crawler App waa ugu fiican iyo gobolka app tahay in waxaa lagu qiimeeyay 5 stars sida marka la barbar dhigo Chine ee ku sifayn la mid ah. Sidoo kale waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka codsiga tahay in la hubiyo in user helo ugu wanaagsan ee lagu sameeyey oo aan wax arrintan oo dhibaato ka dhigi lahaa. Codsiga waa waa rakibi for kuwa doonaya in shaqada dhakhso ah samayn.
2. Disp taariikhqorihii
Waxaa sidoo kale loo horumariyo by shirkadda isku soo koraya sida kor ku xusan iyo app this ayaa sidoo kale lagu qiimeeyo sare marka ay timaado suuqa macruufka ama dukaanka app. Dadka isticmaala ayaa ka heli kartaa shaashadda diiwaan degdeg dhakhso hubinta in wakhtigaas iyo sidoo kale dadaalka waxaa badbaadiyey marka ay timaado raadinta app saxda ah.
3. Spy Cam: qarsoodi Video Camera
Waa app ugu fiican iyo in sidoo kale uu leeyahay kamarad qarsoodi gundhig ay gudahood si user ah oo yaridda mobile ka og yahay in hawlaha socdeen taleefanka markaad mobile ma waxaa isaga la jiray. Waa dhamaadka baaris ah ee isticmaala raadinaya ugu fiican iyo state of technology farshaxanka.
4. rufyaan diiwaanka video
Sidoo kale waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka app sifooyinka tahay gundhig in loo jeclaa oo ag users ah. Inkastoo rating ma aha sare laakiin dhererka waqtiga iyo horumarka cusub app ee ah waxa ay hubaal ka dhigi doonaa hubiyo in wixii kaloo la sameeyo iyada oo aan arin kasta oo sheyga waxaa sidoo kale la casriyeeyay,
5. camera xiriiri Black
Waa app ah in loo yaabaa sida ugu fiican marka ay timaado liiska. Waxaaba madow screen iPhone iyo sii wadaan in ay qoraan hawlaha sida kamarad qarsoodi. Waxa kale oo uu leeyahay taariikhqorihii shaashad gundhig taas oo doorashada ugu fiican ee waqtiga oo dhan ka dhigaysa.
Ka dib waxaa liiska Chine in la yihiin sidii ay rikoorrada screen ugu fiican ee jeer oo dhan iyo in la tixgeliyaa in samaysay shaqada
1. AZ taariikhqorihii screen
Waa app sare qiimeeyo marka ay timaado in la duubo shaashadda ku android iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user waa in aad uga fiirsada si loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah muuqaalada tahay waxaa ku riyaaqay oo lacag la'aan ah iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in codsiga waa freeware ah oo lagala soo bixi karaa iyo lagu rakibay oo lacag la'aan ah si loo hubiyo in user helo natiijada waqti lahayn gudaha iyo ugu fiican ayaa sidoo kale waxaa lagala soo bixi:
2. iLOS taariikhqorihii screen
Sidoo kale waa mid ka mid ah Chine oo u baahan xidid ma at dhan iyo app ee lagala soo bixi karaa iyo lagu rakibay fudayd iyo qanacsanaanta. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah hawlaha farshaxanka ee aan ku riyaaqay kaliya sameeyo laakiin codsiga waxaa sidoo kale qayb ka mid joogto ah oo telefoonka sida waxay u baahan tahay meel bannaan oo ka yar si loo hubiyo in wixii kaloo uu leeyahay la sameeyo si fudud oo ku qanacsan.
3. Mid shot taariikhqorihii screen
Qiimaha user $ 0.99 ee kaliya oo sabab la mid ah waa ugu fiican iyo gobolka app tahay in lagu soo kordhiyay calaamado in ay yihiin kuwa ugu fiican, waana in lagu rakibo si aad u hubiso in user ku raaxaystaa app ee ka dhergaan. Sida ku bixisay si user ah waa in aan marnaba shaki waxtarka app sida uu yahay sida ugu fiican ee jeer oo dhan.
App ayaa kaliya loo dhisay si ay u hubiyaan in user helo shaqada sameeyo sida ugu dhakhsaha badan ayaa loo bilaabay oo ay jirto baahi ma u qaabeynta kasta. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah muuqaalada tahay waxaa ku riyaaqay ka dib app ayaa loo tijaabiyey si fiican u samayn.
5. Screen Unlimited taariikhqorihii Free
Sida magaca gaysteen oo codsiga waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo waxaa jira xad lahayn diiwaangeliyo shaashada sida ay tahay inta badan Chine in lagu horumariyo oo waxaa laga heli karaa dukaan app. App Tani ma aha oo kaliya fududahay in la isticmaalo, laakiin koobaa ayaa sidoo kale wuxuu hubiyaa in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada tahay in arrintan la xiriira ka.
> Resource > Video > Top 10 Screen taariikhqorihii App u iPhone iyo Android